Woyyaaneen Oromoota baatii lamaa oliif hiitee dararaa ture keessaa 9,800 gadi lakkisuudhaaf - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Woyyaaneen Oromoota baatii lamaa oliif hiitee dararaa ture keessaa 9,800 gadi lakkisuudhaaf
Woyyaaneen Oromoota baatii lamaa oliif hiitee dararaa ture keessaa 9,800 gadi lakkisuudhaaf
Hidhamtoonni halkan guyyaa proppaaggaandaa Woyyaaneen guutamaa fi kaadireen itti taphatamaati kan turan
Mootummanan Woyyaanee Oromoota mana isaanii fi daandii irraa guuree baatii lamaa oliif manniin hidhaa fi mooraa woraanaatti daraaa ture keessaa 9,800 akka gadi lakkisuudhaaf murteesse beekame. Namoonnii kunniin kan gadi lakkifaman guyyoottan muraasa keessatti. Haa ta’uu garuu, namoota qabsoo fincila diddaa gabrummaa addadurummaadhaan geggeessan ykn ummata sochoosan jettee yakkite ammo hidhaa woggaa dheeraatiin adabuudhaaf raga sobaa wolitti qabaa jiraachuun barameera.
Baatii lamaan dabran keessa qofa, erga labsii yeroo muddamaatii eegalee, Oromoo 24,000 hidhuu isaa mootummaan amaneera. Namoonni biraa laakkofsa namoota yakka tokkon maletti daandi irraa qabamaniihidhamnaii 50,000 akka caalu dubbatu.
Namoota hidhaman keessaa kanniin lubbu dhaban heddu ta’utu himama. Kanaan alattis, hidhamtoonni yeroo dheeraadhaaf too’annaa Woyyaanee jala turan sarabamiinsa mirgaa, dhabiinsa nyaataa, dhibee fi gidiraa addaddaaf saaxilamaniiru. Gama biraatiinis, baatii lamaa oliif halkan guyyaa proppaaggaandaa Woyyaaneen guutamaa fi kaadireen itti taphatamaati kan turan. Kuni hundi yaalii Oromoo harka kennachiisuu fi qabsoo bilisummaa eegalame fashalsiisuuti, akka xiinxallitootaati.
Oromoon hidhamtoota gadi lakkifaman simachuu fi deeggarsa danda’amu hundaan bira dhaabachuu qaba, jedhu taajjabdoonni.
Previous articleFayyisaa Leellisaa tarree ‘FP 2016 Top 100 Global Thinkers’ seene
Next articleRuuziin sobaa laastikii irraa tolfame seensa Naayjeeriyaa irratti qabame